BIMSTEC ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အလံအသစ်နှင့် Logo အသစ်သတ်မှတ်ရန် ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲကို မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိင်နိုင် – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၀) ရက်
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသော BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative of Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ပူးပါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အလံအသစ်နှင့် Logo အသစ် သတ်မှတ်ရန် ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဉီးဆောင်၍ ပြုလုပ်သွားရန်ရှိပြီး အနိုင် ရရှိသူအား USD(3000/-) ချီးမြှင့်သွားရန်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲသို့ ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအပြင် အခြားမြန်မာနိုင်ငံသား မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး မှီငြမ်းနိုင်ရန် BIMSTEC ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အချက်အလက်များကို Website. www.bimstec.org တွင်လည်းကောင်း၊ ပြိင်ပွဲဝင်အတွက် Terms and Conditions ၊ Process and Indicative Timelines နှင့် Contest Application Form တို့အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ BIMSTEC Website (Download link; https://bimstec.org/? page_id=2600) တွင် ရယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုသော အချက်အလက်များရှိပါက ဒေသခွဲဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၁၂၄၄၇ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။